Kudzidza Tekinoroji Yakakosha seManeja weCRM: Heano Mamwe Maturu | Martech Zone
Nei uchifanira kudzidza hunyanzvi hwehunyanzvi seCRM maneja? Munguva yakapfuura, kuve wakanaka Mutengi Hukama hweManeja iwe waida kune psychology uye mashoma ekushambadzira hunyanzvi.
Nhasi, CRM yakanyanya kuwanda tech mutambo kupfuura pakutanga. Munguva yakapfuura, maneja weCRM ainyanya kutarisisa maitiro ekugadzira kopi yeemail, munhu akasika-ane pfungwa. Nhasi, yakanaka CRM nyanzvi injinjiniya kana data data nyanzvi iyo ine ruzivo rwekutanga nezvekuti meseji matemplate angaratidzika sei.
Steffen Harting, CMO yeInkitt
Mazuva ano, CRM mutambo wakasiyana zvachose. Kuti uwane kushambadzira pachako pachiyero, maneja wese weCRM anofanirwa kugona nharaunda nhatu. Izvi zvinosanganisira data analytics, system yekubatanidza, uye kuziva yekushambadzira tekinoroji teki (uye tariso yevatambi vemusika varipo munzvimbo ino).
Izvi zvinoda ruzivo rwakanyanya rwune hukama nehunyanzvi. Iyo yakanyanya kuwanda-yakatemwa danho rekushambadzira pachako iwe waunoda kuzadzisa, iwo epamberi epamberi miedzo iwe yaunoda kuve nemimba.
Kufambira mberi kwemunhu nguva dzose kunosanganisira kuisa pamwechete mavhoriyamu akakwirira edata kubva kumasystem akaparadzirwa. Ichi chikonzero nei nyanzvi yekushambadzira inofanirwa kunzwisisa kuti masystem aya anotaurirana sei uye kuti data rinochengetwa sei nekupfupikiswa.
Mumakore mashanu apfuura, maCRM Mamaneja atakasangana nawo anoshandisa akasiyana software mhinduro (Vatengi Engagement Mapuratifomu, Vatengi Dhata Mapuratifomu, Ekusimudzira Management Masisitimu, nezvimwewo) uye shanda pamwe neumwe kana akawanda ekuvandudza zvikwata zuva nezuva.
Isu tanga tichibatsira zvikwata zvemadhijitari kuviga hatchet pakati pevanogadzira uye vashambadzi kwemakore mashanu izvozvi uye zvatakacherekedza mushure mekukwira mazana evatengi ndeyekuti vanobudirira vatengesi kana maManeja eCRM ndivo vanonzwisisa tekinoroji.
Tomasz Pindel, CEO we Voucherify.io
Paunowedzera kuziva nezve tekinoroji, iwe unokwanisa kushanda zvakanyanya pabasa rako.
Tekinoroji iri pamwoyo weCRM.
Anthony Lim, CRM maneja kuPomelo Fashoni
Kana iwe uchinzwisisa mashandisiro anoita software yauri kushandisa, kugona kwayo, uye nezvazvinogumira, unogona kuishandisa kusvika pakukwirira kwazvinogona. Kana iwe uchizivawo zvishoma zvekugadzira zvinongedzo, zviri nyore kutsanangura uye kukurukura zvaunoda neboka re tech. Nekudaro, kutaurirana nechikwata chekusimudzira kunova kunatsiridza uye basa ravo rinoshanda zvakanyanya. Kutaurirana kuri nani kwakaenzana nekukurumidza kutumira kodhi yekupedzisira uye kutambisa nguva nenguva zviwanikwa.
Kana iwe uchiziva zvishoma zveSQL kana Python, iwe unogona zvakare kuchengetedza imwe nguva uye kumhanya yakakosha dhata mibvunzo iwe pachako. Izvi zvinogona kubatsira, kunyanya kana iwe uchida chimwe chinhu chekushambadzira uye vako vanogadzira vari pakati pekumhanya, uye iwe haudi kuvanetsa. Kuita zvinhu iwe pachako kunogona kukurumidza kuita iyo data kuongorora maitiro ako uye kurega vako vanogadzira vatarise pane makuru mabasa avanofanira kuendesa.
Kuziva tech haisi kusiyanisa zvekare kweCRM Mamaneja; yakava chinhu chinodiwa.
Ndeapi Matekinoroji Unyanzvi Unofanirwa Kudzidza SeManeja weCRM?
Iwe unofanirwa kuziva akati wandei akakosha mazano.
Data Storage - iyo data inochengetwa sei, chii chinyorwa, ndeipi data modhi, uye nei uchida schema? Iko kufambiswa kwedata kunodiwa rini, uye mutengo waro unofungidzirwa sei?
Kubatanidzwa kweSystem - iwe unofanirwa kuziva mafambisirwo e data kubva kune imwe dura rekuchengetera kune rimwe basa kuti ukwanise kuronga nekuita mabasa akadaro neboka rako rekuvandudza.
Analytics - Basics yemaseva uye yevatengi kuteedzera pawebhu.
Kudzokorora - Ad yekudzokorodza uye mashandiro ayo.
MarTech Toolkit pfupiso:
Iwe unofanirwa kugara uchitarisa yekushambadzira tekinoroji vanopa 'mugwagwa uye kusunungura purogiramu. Iwe unofanirwa kuziva kuti ndeapi mikana uye kuti kana kwete yako yazvino stack ndiyo chaiyo. Sezvo tekinoroji iri kuchinja, ndozvakaitawo maficha (nemitengo) yevakasiyana vanopa software.
Izvo zvaive zvakanaka zvakakwana gore rapfuura zvinogona kunge zvisina kukodzera zvakakwana gore rino, kungave nekuti zvaunoda zvachinja kana nekuti pane zvimwe zvingasarudzwa zviripo kana zvirinani mitengo inowanika kune yakafanana ficha yakatarwa. Iwe unofanirwa kugara pamusoro peetekinoroji nyowani uye vatsva vanopa pamusika kuti uwedzere stack yako.
Kunyangwe iwe ukavaka yako stack iwe pachako, iwe unofanirwa kunge uchitsvaga kurudziro yezvinhu zvitsva kana kufunga zvakare kuchinjira kune wechitatu-bato mutengesi kana mitengo iri pamusika inodonha uye haisisina pundutso kuchengetedza nekuvandudza yako software mhinduro.
Basics yeSQL uye / kana Python:
Iyi ndiyo mitauro inonyanya kukosha inoshandiswa ku data analytics iyo inogona kukugonesa kumhanya nemibvunzo pachako usingabvunze vanogadzira rubatsiro. Kudzidza izvo zvekutanga kunogona zvakare kukubatsira iwe kuti utaure nevako vanogadzira.
Ndekupi Kwaunogona Kudzidza Tech Unyanzvi?
Chikwata chako - iyi ndiyo yekupedzisira sosi yakanaka yeruzivo kukambani yako. Vagadziri vako vanoziva zvakawanda nezve iro rekushandisa iro rauinaro, pamwe nedzimwe nzira. Kunyangwe ivo vangangodaro vasingazive nezve iyo nyowani matekinoroji kunze uko, ivo vanonyatso ziva ese epamoyo mazano iwe aunofanirwa kuziva kushanda navo. Kuva wakavhurika uye kubvunza mibvunzo kunounza iwe kukurumidza, kunyanya kana iwe uchangotanga kushanda mune ino chinzvimbo (kana kukambani ino).
Books - zvinogona kutaridzika kunge zvechinyakare, asi kune akati wandei mabhuku akanaka kunze uko kuti adzidze zvekutanga nezveCRM neCRM software. Izvi zvinogona kuita sarudzo yemahara kana iwe ukawana raibhurari (tarisa maraibhurari ekuyunivhesiti, kunyanya kuBusiness University kana Kushambadzira kana madhipatimendi eIT). Kana zvisiri, kana iwe uine Kindle kunyorera (parizvino iriko muUSA), unogona kukwanisa kukwereta mamwe mabhuku pane iyo CRM musoro wenyaya zvakare mukati mekunyorera chirongwa chako.
Kwevatengi Ukama Management: Concepts uye Technologies
Iyo CRM Handbook: Inotungamira Bhizinesi kune Vatengi Hukama Management
CRM paKumhanya kweChiedza, Yechina Edition: Yemagariro CRM 2.0 Maitiro, Zvishandiso, uye Matekiniki Ekubata Vako Vatengi
Blogs - kune akawanda mablogiki akakumikidzwa kune yevatengi hukama manejimendi manejimendi (CRM) matekinoroji. Heano mamwe ezvangu zvandinoda:
Rondedzero yepamusoro 8 CRM mabloggi neCapterra
Magazini epamhepo - epamhepo magazini ari kumwe kunhu ari pakati pemablog nemabhuku, achipa toni yeruzivo uyezve kusanganisira vanotungamira tekinoroji vanopa.
200 OK imagazini yakagadzirwa naVoucherify.io kubatsira maManeja eCRM kudzidza hunyanzvi hwehunyanzvi hwekuita. Iyo ine zvinyorwa zvinotsanangura matekinoroji matsva uye ehunyanzvi pfungwa, shandisa makesi ane yakaderera- kune isina-kodhi maturusi ayo anogona kushandiswa nyore nevasiri-vagadziri, kubvunzurudzwa nevemaindasitiri nyanzvi vanogovana matipi avo uye manomano ekuti vangadzidza sei hunyanzvi hunodiwa kune basa.
Online makirasi - izvi zvinonyanya kubatsira kana iwe uchida kudzidza izvo zvekutanga zvekodhi, SQL, kana Python makirasi anofanirwa kuve sarudzo yako yekutanga. Kune zvakawanda zvemahara zviwanikwa zvekutepetera mukati.
SQL dzidziso yevatengesi
Skillshare - yekudzidza uye yekugovana chikuva, inopa yemahara kuyedzwa.
EDX - yepamhepo yekudzidza chikuva ine yakawanda yemahara makirasi yakapihwa nemayunivhesiti epasirese epasirese.
Datacamp - Python kosi.
Software ongorora mawebhusaiti:
Kwevatengi Chiitiko Matrix - yakazara CRM mapuratifomu kuongororwa.
Capterra, GetApp, G2Crowd - ongororo yezvakasiyana software zvishandiso, zvinosanganisira kushambadzira tekinoroji.
Podcasts - kana iwe uchida kuteerera kune chimwe chinhu paunenge uchienda kana kana uchinwa kofi yako yemangwanani, podcast zvakanaka! Unogona kudzidza chimwe chinhu uye Pushira basa rako kumberi usingade imwe nguva.
CRM Taura podcast
Kuverenga maHTML - unogona kudzidza zvakawanda kubva pakuverenga zvinyorwa zvezvishandiso zvakasiyana zvaunoshandisa kana kufunga nezvekushandisa. Mushure meimwe nguva, iwe unozodzidzawo yakawanda yekuvandudza-yakatarwa mazwi kubva kwavari.
Trailhead - kubva kuSalesforce inoshamisa yemahara zviwanikwa pamhepo.
Chero ipi sosi yaunofarira kutanga kudzidza nayo, chakanyanya kukosha kutanga. Taura nevezera rako, taura nevakagadziri vako, usatya matekinoroji ezvinhu zvezvinhu.
Voucherify.io iyo yese-in-one API-yekutanga kusimudzira manejimendi software inoda mashoma ekuvandudza musimba kuyananisa, inopa yakawanda kunze-kwe-iyo-bhokisi maficha uye kusanganisa, uye yakagadzirirwa kupa simba kushambadza zvikwata kuti vakurumidze kuvhura uye nekubudirira kubata coupon uye chipo kadhi kukwidziridzwa, kupa, kuendesa, uye kuvimbika zvirongwa.
kuburitsa: Martech Zone ine hukama hwehukama muchinyorwa chino.
Tags: 200 zvakanakaAnalyticscapterracapterrraachinoshikaCRMcrm pakumhanya kwechiedzacrm mabhukucrm vatungamiriricrm bhukucrm manejacrm maneja mabasacrm mvp podcastcrm taura podcastcrm tekinorojicrm mawebhusaitimutengi ruzivo chizvaromutengi wehutano hwehukamadata analyticsdate chengetedzodatacampkuenda crmedxg2mhomhogetappinkittmartechpomelo fashoniPythonkudzokera shureUnyanzvisqlsteffen hartingkusanganisa systemzvigadzirwa zvemichinavocha